Safaaradda Sacuudiga ee Iiraan oo la gubay - BBC News Somali
Safaaradda Sacuudiga ee Iiraan oo la gubay
3 Jannaayo 2016
Lahaanshaha sawirka MIZANONLINEIR
Image caption Safaaradda Sucuudiga ee Iiraan oo qiiq uu ka baxayo
Dibadbaxayaal ka caraysan dilkii uu Sucuudiga u gaystay wadaad caan ah oo Shiica ah ayaa waxa ay weerareen safaaradda Sucuudiga uu ku leeyahay Iiraan.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay arkeen xubno ka tirsan kooxda u tababaran sida milateriga oo dhismaha safaaraddaasi ee magaalada Tahraan ku tuuraya bambooyin laga sameeyay batrool, halkaasi oo ay dibadbaxayaashu burburiyeen alaabtii taalay ayna dhismaha safaaradda dab qabadsiiyeen ka hor inta booliska Iiraan aanay kala eryin dadkaasi.
Xilli sii horraysayna dowladda Iiraan oo ah awoodda ugu ballaaran ee Shiicada dunida ayaa uga digtay Sucuudiga in ay ka shalayn doonto dilka ay u gaysatay Sheekh Nimr al-Nimr, kaasi oo loo dilay dambiyo la xiriira argagixisanimo iyo qeybtii uu ka qaatay dibaxyo ka dhan ah dowladda Sucuudiga intii uu socday Kacdoonkii Carabta.
Dilka uu Sucuudiga u gaystay Nimr al Nimr ayaa la hubay in uu ka caraysiin doono Iiraan oo isu aragta in ay mas’uul ka tahay Shiicada laga tirada badan yahay ee ku nool Bariga Dhexe.
Dad badan ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee safaaradda Sucuudiga ee magaalada Tahraan si ay u muujiyaan caradooda ku aadan arrintaasi.
Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa u dhacay gudaha safaaradda oo waxa ay ku tureen bambooyin laga sameeyay batrool ka hor inta boolisku aysan kala eryin.
Qof goobjooge ah ayaa BBC-da laanta Afka Persian-ka u sheegay in xubnaha maleeshiyada taageerto dowladda ay qayb ka ahaayeen weerarka.
Image caption Dad isugu soo baxay Sucuudiga oo ka caraysan dilka Nimr al Nimr
Goor sii horreysayna, dowladda Iiraan ayaa si cara leh uga jawaabtay dilka wadaadkaasi, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ay ku eedaysay Sucuudiga in ay taageerto argagixisanimada dibadda isla markaana ay caburin iyo dil kala hortagto dadka ku nool gudaha ee dowladda dhaliilsan.
Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa ballan qaaday in ay ku dhaqaaqi doonaan aargoosi.
Iiraan oo ah Shiico iyo Boqortooyada Sucuudiga oo ah Sunni ayaa waxa ka dhaxeeya loolan ay ugu jiraan awoodda gobolka, arrintaasi oo sii hurisay colaaddda mad-habta ku salaysan ee ka jira laga billaabo Yaman ilaa Suuriya.
Dhacdadan ugu dambeysayna ayaa sii fogayn karta cadaawadda u dhaxaysa labadan mad-hab ee ku abtirsada diinta Islaamka.